Elevator Escalator Tooling Production Line Vagadziri - China Elevator Escalator Tooling Production Line Suppliers & Factory
Escalator yekushandisa control system
Magetsi kudzora basa Kune maviri modes. Iyo yekutanga mhando yakajairika modhi, uye yechipiri modhi ndeyokugadzirisa mamiriro. Iyo yakajairika mamiriro apo ese asiri-ekugadziridza plugs mune yepamusoro uye yepasi muchina mukamuri akaiswa. Iyo inokwira inotangwa kutenga vashandi neiyi kiyi kana pasina munhu mairi. Tsvimbo inodzvanya bhatani rekumisa kuti imise escalator. Kana chiratidzo chakakosha chagashirwa, inotangwa uye inomhanya yakatarwa nekumhanyisa. Sunungura rimwe remapuranga risiri-gadziriso uye uise bhokisi rekugadzirisa mukati mekugadzirisa ...
Escalator musangano wekushandisa saiti peji 3
Iyo Working Principle Escalator imhando yekuenderera mberi kwemidziyo iyo inoumbwa neketani inotakurika yakasarudzika yemhando uye bhandi rinodzvinyirira rakakosha chimiro. Iyo ine akawanda mabhenefiti akadai saizi hombe yekufambisa, inoramba ichitakura vashandi. Saka zvinodiwa zvekuchengetedza zvakakwira kupfuura zvimwe zvinoshandiswa. Iyo inonyanya kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji nekuyerera kunoyerera kwevanhu, sekumisika, makirabhu, zviteshi, nhandare nendege. Kuvaka Iyo main drive ine yakakwana ...
Iyo Working Principle Escalator imhando yekuenderera mberi kwemidziyo iyo inoumbwa neketani inotakurika yakasarudzika yemhando uye bhandi rinodzvinyirira rakakosha chimiro. Iyo ine akawanda mabhenefiti akadai saizi hombe yekufambisa, inoramba ichitakura vashandi. Saka zvinodiwa zvekuchengetedza zvakakwira kupfuura zvimwe zvinoshandiswa. Iyo inonyanya kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji nekuyerera kunoyerera kwevanhu, sekumisika, makirabhu, zviteshi, nhandare nendege. Kuvaka Iyo main drive yakwana ...